के कलाकार ले कृषि गर्न हुन् र ? दीपकराज गिरी - krishipost.com
के कलाकार ले कृषि गर्न हुन् र ? दीपकराज गिरी
कलाकार दीपकराज गिरी फार्म–हाउस खोल्ने तयारीमा जुटेका छन् । दीपक कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण स्क्रिप्ट लेख्दालेख्दै छोडेर फार्म–हाउस खोल्ने तयारी थालेका हुन् । काठमाडौंको चन्दागीरिस्थित दहचोकमा रहेको पुख्र्यौली जग्गामा फार्म–हाउस खोल्ने योजना बनाइरहेको उनी बताउँछन् । “हजुरबाले जोडेको १० रोपनी जग्गा छ, त्यसबाहेक केही जग्गा म थप्दैछु,” दीपक भन्छन्, “फार्म हाउस निर्माणका लागि चारदेखि पाँच कारोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने मैले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छु ।